Fashion Style ဘယ်နှစ်မျိုးရှိတယ်လို့ထင်သလဲ? အပိုင်း(၃) – YANGON STYLE
Fashion Style ဘယ်နှစ်မျိုးရှိတယ်လို့ထင်သလဲ? အပိုင်း(၃)
လွတ်လပ်တဲ့ ဒီဇိုင်းဖြစ်ပြီး ဆယ်ကျော်သက်တွေ အဝတ်များတဲ့ ဒီဇို်င်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ရန်ကုန်လူငယ်တွေကြားမှအဝတ်များတဲ့ ဒီဇိုင်းဖြစ်တယ်။ ကာလာမျိူးစုံ ဒီဇိုင်းမျိူးစုံက ခုခေတ်မှာ Streetwear ကလဲ trend တစ်ခုလို ဖြစ်လာနေပါတယ်။ဒီပုံစံဟာ 1980 ခုနှစ်ကနေ ခုချိန်ထိ ခေတ်စားလာတဲ့ ပုံစံဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီ Streetwear စတိုင်က စကိတ်ယဉ်ကျေးမူကနေ ဆင်းသက်လာတဲ့စတိုင်ဖြစ်တယ်။
မြန်မာပြည်မှာတော့ အဝတ်နည်းတဲ့ ဒီဇိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အေးတဲ့ရာသီဥတုနဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ ဒီဇိုင်းဖြစ်တာကြောင့် မြန်မာပြည်ဆိုရင် တောင်ပေါ်ဒေသတွေမှ အဆင်ပြေမယ့် ဒီဇိုင်းတစ်ခုပါ။ လူတွေ သိပ်မဝတ်ကြပေမဲ့ ဝတ်ကြတဲ့ သူတွေကို ကြည့်ပြီး အားကျရတယ်ဆိုရင် မှားမယ် မထင်ပါဘူး။
သူကတော့ ရုံး၊ အစည်းအဝေး၊ ပွဲနေ့ပွဲထိုင်တွေမှာ အဝတ်များတဲ့ ပုံစံမျိူးပါ။အရမ်း smart ကျတဲ့ ဒီဇိုင်းမျိူးလဲဖြစ်တယ်။
By: Mu Mu